चितवन, साउन ६ –
पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–नौबिसे सडकखण्डमा साना–ठूला २०० भन्दा बढी पहिरो खसेका छन् । चितवन र धादिङ जोड्ने मौवाखोलाको पुल र सडक जोड्ने भाग नै बगाएको छ। सो खण्ड डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरले हेर्ने गर्दछ । कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनियर कृष्णराज अधिकारीका अनुसार आज पनि ठाउँठाउँमा पहिरो खस्ने क्रम जारी छ ।
बिहान मात्र जोगिमारामा ठूलो पहिरो खसेको छ । उनले भने, “मुग्लिङ–नौबिसे सडकखण्डमा मात्र साना–ठूला २०० भन्दा बढी पहिरो खसेका छन् । सबैभन्दा बढी समस्या मौवाखोलामा रहेको छ ।” मौवाखोलामा पानीको बहाव घटेमा ग्याविन जालीमा ढुङ्गा भर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए । यसका लागि नुवाकोटबाट जाली मगाइएको छ । बाटो अवरोध भएकाले आइपुग्न समय लाग्ने छ । बेलिब्रिजभन्दा यो सहज र छिटो हुने उनले बताए । स्थानीय प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीलगायतसँग आज बिहान छलफल गरी काम अघि बढाइने उनले बताए ।
सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले पानी रोकिएपछि सो सडकखण्ड खुलाउन दुई दिन लाग्ने बताए । “पानी नरोकिएसम्म मौवाखोलामा काम गर्न मिल्दैन । काम थालेपछि दुई दिन हामीलाई लाग्छ”, उनले भने। अन्य खुला रहेका सडक प्रयोग गर्न उनले सुझाव दिए। वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुको विकल्प अहिले नरहेको उनको भनाइ छ ।
यता नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको चार किलोमा खसेको ठूलो पहिरो पन्छाउन सकिएको छैन । डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका इञ्जिनियरका शिव खनालका अनुसार पानी केही रोकिएमा पहिरो पन्छाउन शुरू गरिनेछ । काम थालेको चार घण्टामा थप पहिरो र पानी नआएमा चार किलोमा एकतर्फी सडक खोल्न सकिने उनले बताए ।
प्रदेश १ मा थप ६५४ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि, ९ जनाको मृत्यु
खोलाले बगाउँदा बाख्रा चराउन गएकी महिलाको मृत्यु
पहिरो खस्दा कालीपुलका आठ घर क्षति, तीन घाइते
नेपालमा आज ५३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ५ जनाको मृत्यु
१२ कक्षा दिएका बिद्यार्थीलाई नि:शुल्क आइटि ब्रिज कोर्सस, उत्कृष्टलाई बिआइटी पढ्न छात्रवृत्ति पनि
सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड : तोलाको एक लाख तिन हजार पाँच सय
‘माग पुरा नभएसम्म तेल उठाउँदैनौँ’
प्राविधिक उपरथी डा. खत्रीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान
सुनको मूल्य फेरि घट्यो, तोलाको कति ?
आजको मौसमः चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना
नेपाल क्रिकेट संघले आयोजना गर्ने सम्पूर्ण खेलहरु एक्सन स्पोर्ट्सले प्रसारण गर्ने
बेलायतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८९ हजार नाघ्यो